At CoinFalls, waxaan jeclaan in lagu daweeyo ciyaartoydeena ay daacad la martiqaad in si Barnaamijka VIP gaar ah! Xubno ka mid ah lacagta barnaamijka VIP ka gunooyin dheeraad ah iyo dalabyo cashback at casino CoinFalls ah. xubnaha waxaa siinay la abaalmarino soo noqnoqda iyo dalacsiinta in iyaga siin doonaa mudnaanta VIP gaar ah casino.
Barnaamijka VIP waa kaliya ciyaartoyda hela marti gaar ah ku salaysan hawlaha ciyaaraha ay bisha. The more you deposit and play, fiican fursadaha aad ka heli casuumaad.
Haddii aad ku cusub tahay CoinFalls our casino mobile, but are a member of similar programmes at other casinos, fadlan noo sheeg si aan u soo diri kartaa in aad casuumaad.
xubnaha VIP ka faa'iidaysan karaan:
maamulayaasha VIP go'an ee maaraynta xisaabtaada
gunooyin dheeraad ah
Joogtada ah Prize barbaro
dalabyo Exclusive iyo dalacsiinta
Khibrad, kuwaas oo dhan abaalmarinno lagu daro dalabyo joogto ah iyo dalacsiinta gunooyin. Wixii macluumaad dheeraad ah mail noogu support@coinfalls.com ama talktous@nektan.com
Waxa kale oo aad nala soo xiriiri kartaa: +44 203 478 2648